Kufurirwa masimba emadhimoni chinhu chaicho | Apg29
Kufurirwa masimba emadhimoni chinhu chaicho
Zvino ndinoda kuzopupurira yakaipisisa handina ruzivo maererano kumanikidzwa nemauto nemadhimoni.
Kufurirwa mauto nemadhimoni chinhu chaicho kuti dzinobva mweya wakaipa wenyika. VaKristu Live, sezvo Jehovha akanga chipo chomudzimu kupima kuti vanowanzonzwa kumanikidza ichi. Ndiri chaizvo nehanya mumweya wangu uye unogona kupupura sei inondipa chiitiko ichi.
Kana ndichifamba guta, ini ndindosangana munhu ane ushamwari uye hasha mweya mukati make. Zvino ndava kuda "inotutumadzisa" kuchena kwandiri kubva iyeye.
Zvakasiyana - kana ndisangane munhu kunyoroveswa runouyisa norwizi kutapira kubva munhu.
Nemadhimoni simba Bhodhoro doro
Handina dzimwe nguva vaenda mhiri Systembolaget uye anozivikanwa simba nemadhimoni breather kubva mumabhodhoro nezvinobata. Zvakare ndinoziva madhimoni nesimba fodya youtsi.
Kana pane bhowa chirongwa zvinhu paTV inotutumadzisa tsvina mauto pamusoro pangu. Saka handina kumbobvira zvakaipa uye dzinoparadza zvirongwa.
In mapurogiramu purogiramu risati mushumo kazhinji kuva zvinhu zvingavashayisa tsvina mweya wangu kuti Jesu akasuka neropa rake rinokosha. Saka, ini maziso angu uye mubatirire nzeve yake kuti kudzivisa kuona uye kunzwa kwavari.
Ndinonzwa weheavy metal mumhanzi nemadhimoni, kunyanya kana paine dzaSatani okunze. Handina kuteerera "mumhanzi" akadaro, nokuti ndinonzwa saizvozvo bhowa. Handina kufanana nedombo mumhanzi zvavo. Asi kunge akanzwa zvakadaro asi kuti dai izvozvo.
Vamwe nguva yapfuura, ndaigara panzvimbo bhasikoro mbavha dzaiva parwendo. Ndakanga vanobirwa bhasikoro rangu, zvandakanga amisa panze chivako yandaigara. Kana Ndinorangarira nemazvo kuti bhasikoro rakanga rakanyatsozarirwa, asi vakanga vachiri yakabiwa.
Mumwe akandipa mhinduro kuenda Vanhu Park, uhwo vanhu vaishandisa kusiya bikes yakabiwa.
I vakateerera Council uye akaenda kupaki kunotsvaga bhasikoro rangu. Ndakaenda kumativi ndichitsvaka kwose kwose. Zviitiko Entertainment apedza uye vanhu vakanga vasara kupaki, asi ndakanzwa simba mumweya wangu kuti masimba emidzimu yakaipa akatambura. Ndaratidzwa akadaro eerie ezvinhu.
Ndaisazombofa ndakakwanisa kushanyira mabhaisikopo, kutamba chiitiko, zviitiko zvemitambo kana zvimwe varaidzo yokuitira. I vaizokomborerwa rakasviba yakadaro uye bhowa mhepo kuti handina atsungirira kuti ikoko.
Kuipa I wakaona
Zvino ndinoda kuzopupurira yakaipisisa handina ruzivo maererano kumanikidzwa nemauto nemadhimoni. Ndaratidzwa panze uye muna Vasaloppet muna Mora imba.
imba The Vasaloppet vaiva bytardagar pamusoro Vasaloppet tsono. Vanhu aisimbogara ikoko uye Exchange, vachitenga uye vachitengesa navo. Mudzimai wangu aiva kuti akanga ava kuenda sell, saka ndakaenda naye kumba Vasaloppet vake. Kunyange sezvo isu akamira kunze pasuo kukamuri, ndainzwa uye kufunga, 'Chokwadi bhowa mwoyo kwakapararira pano. "
Zvadaro takaenda kumusuwo, apo akanzwa kuchena, bhowa mhepo kwakatosimba.
In yepasi raiva nzvimbo vaya akachinja tsono dzavo vakanga vagere patafura dzavo. Takaenda ikoko uye vakaona kuti pane vanhu vazhinji pane vaida kuisa tsono dzavo dzaiva.
Kwemadhimoni mauto vakamhanya vakananga ini
Kana isu apinda mumba vakawira mauto nemadhimoni pamusoro pangu nesimba kwazvo. Zvaiita sokuti mehamburamakaka munhu wakandisunda namanhede. Ndakanga ndava atadze kunyatsofunga uye akapotsa akawira pamusoro.
Asi zvino danho Mutsvene nesimba guru mukati mangu, sezvo imwe counterweight pamusoro mauto nemadhimoni. Ndakanzwa kuzvikudza uye akatakurirwa Mutsvene.
Mweya wakaipa wenyika
Isu vanoponeswa vane mweya wenyika kundorwa. masimba ayo hapana kutamba. Ndinonakidzwa chaizvo kugona kuona. Zvinokosha kuti uzadzwe noMweya Mutsvene uye kuzviraramira ropa raJesu wokudzivirira achengetedzwe.
Jesu akakunda simba zvakaipa. Akasimuka nesimba uye zvombo vatongi zvakaipa hwacho. Akapwanyira wenyoka uye akaita aSatani simba chinhu. Pane shoko raMwari, iro rinosimbisa edu ushingi uye anonyaradza:
"Vana vanodikanwa, imi muri Mwari uye ukakunda pamusoro pavo, nekuti uyo uri mamuri mukuru ari munyika" (1 Jn 4: 4.).